Ndi Agha Naịjiriya jụrụ ime ihe ọbụla maka ọgbụgba ama ha nwetara na Dapchi – hoo!haa!!
Ndi Agha Naịjiriya jụrụ ime ihe ọbụla maka ọgbụgba ama ha nwetara na Dapchi
Legọsị: Otu Amnesty International eboola Ndi Agha Naịjiriya ebubo emeghi ngwa ngwa mgbe ha nwetara “ọgbụgba ama” elekere ole m’ole tupu Boko Haram atọro ụmụ agbọghọ otu Narị n’iri n’ụlọ akwụkwọ dị na Dapchi, Yobe Steeti.
Na ozi nchọpụta ha weputara ọhụrụ, otu a na-ebo ebubo na Ndi Agha nakwa Ndi Uwe Ojii nwetara ọkpụkpọ oku ekwentị ruru ise n’ehihie ụbọchị ahụ, ịdọ ha aka na ntị na ndi bu egbe na-abịa n’Ụlọakwụkwọ Government Girls Science and Technical College n’obodo Dapchi.
Ha gbadoro ụkwụ n’ọgbụgba ama si n’aka ndi akaebe nakwa ndi bi n’ebe ahụ, ndi sịrị na ha kpọrọ Ụsụụ Ndi Agha Geidam nke dị na steeti ahụ nakwa ndi uwe ojii ka ha hụrụ ndi bu egbe sotịa na-etinye isi n’ụzọ ụlọ akwụkwọ ahụ.
Anyị ga-echeta na Gọvanọ Steeti ahụ boro Ndi Agha ebubo ịkwara pụọ na Dapchi izu ụka ole n’ole tupu ndi Boko Haram abịa tọrọ ụmụ agbọghọ ahụ.
Ọsaị Ojigho, onye Nlekọta otu Amnesty International na Naịjiriya kwuru sị : “Ndi ọchịchị Naịjiriya ga-enyochalata iri mperi ọrụ nchekwa nke na-enweghi ngọnahụ nke mere eji nwee ntọrị a na-enweghị ihe ọbụla e mere igbochi ya”
N’okwu nke ha, Ọnụ na-ekwuru Ndi Agha Naịjiriya, Jọn Agịm sịrị na eziokwu adịghị n’ebubo ahụ. ” Kedu ụsụụ ndi agha nke ndi mmadụ kpọrọ ịgwa ha maka ya bụ mwakpọ na-achọ ime?”. O bokwara otu Amnesty International ebubo ibute ọgbata uhie n’agha a na-ebuso ndi Boko Haram
Bukky Shonibare, onye so na ndi ndu otu Bring back Our Girls kwuru sị:” O doola anya ugbua– ha tọrọ, anyị na ha akpaa, ha anara ego mgbapụta, atọhapukwuo ndi otu ha eji eji, ha alọghachi kwadosie ike iji mezi nke ka nke” Ọ na-arụgara aka n’etu Gọọmentị si ebunye ndi Boko Haram akatamkpo ego dịka ego mgbapụta nke ha ji azụrụ ajọ ngwa ọgụ dị iche iche iji gaa n’ihu n’arụ ha na-akpa
Previous Post: Okorọcha apụghị ịkwụsịnwu m- Madụmere
Next Post: Anyị enweghị ntụkwasiobi na kọmiti nnyocha INEC-ICSCO
Naịjirịya bụzị ” ụwa yagara aga”